Ogaden Press Agency(OPA) News headlines from Ogaden,Ethiopia,Somalia,All Regions of Horn of Africa and the world. Xarakada Al-shabaab oo sheegtay inay dagaallo ka dhacay Gobolka Gedo ku dileen Ciidamo u dhashay dalka Sierra Leone.
Posted by Ogadentoday-Chief Editor on June 15 2012 02:29:37
Jimco, June 15, 2012 (Ogadentoday Press) � Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay in dagaal ka dhacay gobolka Gedo ay ku dishay askar u dhalatay dalka Siiraaliyoon, kuwaasoo ay sheegeen in ay ka barbar dagaalamayeen ciidamada dowladda KMG ee ku sugan degmada Yurkud ee gobolka Gedo. Afhayeenka dhanka howlgallada ee Al-shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo ka hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalyahannooda ay ciidamo katirsan kuwa Siiraaliyoon ku dileen dagaal ka dhacay nawaaxiga degmada Yurkud ee gobolka Gedo.
Xarakada Al-shabaab oo sheegtay inay dagaallo ka dhacay Gobolka Gedo ku dileen Ciidamo u dhashay dalka Sierra Leone.
Jimco, June 15, 2012 (Ogadentoday Press) � Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay in dagaal ka dhacay gobolka Gedo ay ku dishay askar u dhalatay dalka Siiraaliyoon, kuwaasoo ay sheegeen in ay ka barbar dagaalamayeen ciidamada dowladda KMG ee ku sugan degmada Yurkud ee gobolka Gedo.